ကြွေတစ်ပွင့် ခြွေတစ်ပွင် လွမ်းသူသံစဉ်
» Chan Myae Oo
» Royal Myanmar
» Blank Paper်
» ဟိန်းမောင် (ပတ္တမြားမြေ)
» Black dream
» Thu Thu
From Forward Mail (1)
Tag ကြတာလေးတွေ (1)
မယုံရင် ပုံပြင် (1)
မျှဝေချင်တဲ့ စာကလေးတွေ (5)
let break up?
ရယ်တတ်၊ ပြုံးတတ်၊ ငိုတတ်တဲံ သာမန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ စိတ်ကူးတွေကိုရေလောင်းရင်း အိမ်မက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ ခြေလှမ်းမှန်မှန်နဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက် နေသူတွေထဲက သာမန်လူသား တစ်ဦး။
Posted by ငယ်ဆူးအိမ် at 7:29 PM0comments
Posted by ငယ်ဆူးအိမ် at 6:42 PM0comments
Posted by ငယ်ဆူးအိမ် at 6:37 PM0comments
Posted by ငယ်ဆူးအိမ် at 1:04 PM0comments
ယုံကြည်မှုတွေရဲ့ မပီမသငြီးငြူသံ ကြားလိုက်မိတယ်။
Posted by ငယ်ဆူးအိမ် at 12:11 PM 1 comments
အရင်တချိန် ဧပရယ်နွေရဲ့ စက္ကန့်တစ်ခုအောက်မှာပေါ့။
ကျဆုံးတော့မယ့် ချစ်ခြင်းတွေကို သတိမထားမိခဲ့ဘူး
ခုတော့ နေ့စွဲလေးတွေက ဒါဏ်ရာတွေပြည့်လို့။
ဒီဧပရယ်မှာ စွန့်ကြဲလှည့်ပါဦး ကောင်လေးရယ်။
Posted by ငယ်ဆူးအိမ် at 12:34 AM0comments
တခါတလေ ငါ့ကိုယ်နဲ့ငါ့စိတ် ရန်ဖြစ်ရတဲ့အထိပေါ့။
ချစ်သူရနံ့တွေပါတဲ့ လေပြည်တွေကိုတောင်မှ သိမ်းထားချင်တဲ့သူပါ။
ငါဟာ အိပ်မက်တွေထဲက မလန့်နိုးနိုင်သေးဘူး။
တခါတလေ ငါ့ကိုယ်ငါ မုန်းနေမိတဲ့အထိပေါ့။
Posted by ငယ်ဆူးအိမ် at 10:00 PM2comments
တော်လှန်ရေးကာလတုန်းက အဖိုးက အသတ်ခံရတယ်
အော် ဒုက္ခ… ဒုက္ခ
အသက်နဲ့ အရှက်တွေကို ဖက်နဲ့ထုတ်ထားရတဲ့ဒီဘ၀။
ချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့ တို့နိုင်ငံ အကြွေးတွေက၀ိုင်း
ပြည်သူတွေ ငတ်နေခဲ့ကြရတဲ့ရက်တွေကို ရေတွက်ကြည့်စမ်းပါ။
အသက်ပေးသူတွေ ပေးသွားခဲ့ကြတဲ့ တို့အာဇာနည်တွေ
အရှက်တွေ သိက္ခာတွေနဲ့ရင်း ဘ၀ပျက်သွားကြတဲ့ နိုင်ငံ့သမီးပျိုတွေ
ဒါတွေကို သွေးအေးအေးနဲ့ မေ့ပစ်ကြမှာလား
အတိတ်တွေကို ခြေရာဖျောက်လို့ရရိုးလား မိတ်ဆွေ
Posted by ငယ်ဆူးအိမ် at 11:01 AM 1 comments
ဒါပေမယ့် ငါ့အချစ်တွေကို အရောင်မပြောင်းလဲနိုင်သေးဘူး…. ချစ်သူ။
ဒီနူးညံ့မှုတွေကပဲ ငါ့ကိုအနိုင်ယူသွားတာ ခဏခဏပေါ့။
ရူးမိုက်တဲ့ငါ့အချစ်တွေကပဲ တရားလွန်တာလား… ချစ်သူ။
ငါ့ဆီက ပေးဆပ်မှုတွေကိုသာ မင်းတောင့်တခဲ့တာများလား။
ငါလိုချင်ခဲ့တာက မင်းဆီက အချစ်တွေပါ…. ချစ်သူရယ်။
ရှုရှိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ချစ်သူ့ရနံ ငါမမေ့သေးဘူး။
ငါ့နှလုံးသားအိမ်ကလည်း မင်းအတွက် တံခါးတွေစေ့ထားဆဲပါပဲ။
မင်းကို မျှော်နေမိတုန်းပဲ…. ချစ်သူ
Posted by ငယ်ဆူးအိမ် at 11:43 PM0comments
အိမ်မက်တွေ ဆက်မက်ခွင့်ရချင်သေးတယ်…. ကို။
အလွမ်းတေးတွေကို ငါ…. သီကုံးတတ်ခဲ့ပြီ။
တစ်ကြိမ်တစ်ခါမက ငါ… သက်သေထူခဲ့တယ်
Posted by ငယ်ဆူးအိမ် at 12:25 AM0comments
Show your support foraFree Burma by joining "Free Burma's Political Prisoners Now!" Click here to sign in petition.
တကယ့်တကယ် တွန်းလှန်ဖို့အရေး ကလဲမဝေးတော့ပြီမို့ အရေးကြီးလျှင် ဖြင့် သွေးစည်းပြီး သွေးနီးရာ ဆိုသည့် အတိုင်း ကိုင်း.... ထထကြွကြွနှင့် ၀ိုင်းကြပေရော့.......။
ရဲဘော်တို့.......... လက်ထဲမှာ ဆုပ် ကိုင်ထားတဲ့အာဏာကို ဘဘောထား ကြီးစွာနဲ့ အလိုအလျောက် စွန့်လွတ် သွားတဲ့ အာဏာရှင်မျိုး ကမ္ဘာ့သမိုင်း မှာ ဘယ်ခေတ်ဘယ်အခါကမှ မရှိခဲ့ ဖူးပါဘူး။ နောက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂက ကယ်တင်လို့ လွတ်မြောက်သွားတဲ့ နိုင်ငံရယ်လို့လည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ တ နိုင်ငံမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဒိုင် ယာလော့တို့၊ လုံခြုံရေးကောင်စီတို့ ဆိုတာတွေနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး အချိန် တွေဖြုန်းမနေပါနဲ့။
ဟေ့.... သေလည်း မြန်မာပီပီ ဇာတိမာန်နဲ့ သေကြပါ။ ရန်သူကမိရင် လက်အားရင်လက်နဲ့ထိုး၊ ခြေအားရင်ခြေနဲ့ကန်ပါ။ နောက်ဆုံး ပါးစပ်အားနေရင် ပါးစပ်နဲ့ကိုက်ပြီးမှ ရဲရဲသာသေပြလိုက်တာပေါ့။
တိုင်းပြည်၏ အကျိုးစီးပွားကိုထောက် ထား၍ ဤတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဖြစ်စဉ် အောင်မြင်စေရေးအတွက် အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ကျမအသင့် ရှိပါသည်။ ဤရည်မှန်းချက်အောင်မြင် ပေါက်ရောက်စေရန်အတွက် အပြု သဘောဆောင်သည့် တွေ့ဆုံဆွေး နွေးရေးလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရန် ကျမ ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ အစိုးရနှင့်တကွ အခြားဆက် စပ်ပတ်သက်သူအားလုံးကို ဤစိတ် ဓါတ်အတိုင်း ကျမနှင့်လက်တွဲဆောင် ရွက်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
၈၈ ကျောင်းသားခေါင်း ဆောင် ထွန်းမြင့်အောင်
စကားလုံးသက်သက်နဲ့တော့ မြန်မာ ပြည်နိုင်ငံရေးပြဿနာကို ပြေလည် မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ စိတ်မကောင်းဖြစ် မိပါသည်တို့.... ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချ လိုက်ပါသည်တို့.... စိတ်ပျက်မိ ပါ သည်တို့.... စကားလုံးအခွံတွေ သက် သက်နဲ့တော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ မြန်မာ ပြည်ပြဿနာကို တကယ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲစေချင်တယ် ဆိုရင် အားပါတဲ့အရေးယူ ဆောင်ရွက် ချက်တွေ မဖြစ်မနေရှိဖို့လိုတယ်။
Myanmar Image Gallery MP3
အချိန်ပေးပြီး လာရောက်လည်ပတ်ကြသူတွေ…. ငယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို မျှဝေခံစားပေးကြသူတွေ….. သူငယ်ချင်းအားလုံးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။